Sandals Resorts uye Sandals Foundation: Kugonesa Vanhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Sandals Resorts uye Sandals Foundation: Kugonesa Vanhu
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts International yakagadzirwa Sandals Foundation, uye ine uzivi uhu: Isu takaona kuti kana tichiisa mari mumunhu mumwe chete, tiri kupa simba kune vanhu - mhuri dzavo, shamwari, nharaunda, uye nyika dzakagadzirirwa kuti dzibatsirwe nezvipo zvavo.
"Chikamu chakanakisa chekuita basa iri kuziva kuti pakupera kwezuva, kunyangwe kushanda nesimba uye dzimwe nguva matambudziko akakosha, isu tiri kubatsira kuita hupenyu hwevanhu kuti huve nani," akadaro Joseph Wright, Great Shape! Inc, Executive Director.
Zvinetso zvinotarisana neCaribbean zvakasiyana uye zvakaomarara sevanhu vavanokanganisa. Nharaunda dzinofanirwa kurwisa nyaya dzakadai sehurombo, kusaenzana, uye mhirizhonga zuva rega rega. Nekushanda pamwe chete nemasangano ehurumende, vatungamiriri vevanhu, uye vanopa vakazvimirira, Sandals iri kubatsira kugadzira mhinduro nyowani dzinopa simba kune vechidiki vari panjodzi, vakadzi, vanamuzvinabhizimusi vemuno, uye vanotambura.
Sandals Zvirongwa & Zvirongwa
Chikoro cheBhizinesi Vanamuzvinabhizimusi (Kudzidziswa Kwekushambadzira)
“Ipa Munhu Hove, uye Unomupa Chikafu kwezuva rimwe. Dzidzisa Munhu Kuredza, uye Unomupa Chikafu Kweupenyu Hwose. ” Kudzidziswa kwemabhizimusi kwakagadzirirwa kupa vanhu kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti vaone, kutanga, uye kusimudzira bhizinesi rakabudirira, vachigadzira mikana yemabasa yavo uye nedzimwe nhengo dzemunharaunda yavo.
Yechokwadi vechidiki kusangana kunobatsira nharaunda, masangano, uye nyika dzakazara. Iko kugona kwechokwadi kuita panjodzi vechidiki kwakakosha kuti uve nechokwadi cheremangwana rakanaka kune chero nyika. Vechidiki vanobatsirwa uye vanowana hunyanzvi hwehupenyu uye mikana yekudzidza kuburikidza nemitambo, mimhanzi, kudzidziswa hunyanzvi, uye zvimwe zvirongwa zvekupindira.
Vana vepamberi-temu vanozvarwa muAntigua vane mukana wakakura wekurwa zvichitevera kupihwa kwe2 yakazara Infant Kuchengeta Nzvimbo kubva kuSandals Foundation (yakakosha kusvika madhora zviuru makumi maviri) kuPediatric Unit yeMount St. John's Medical Center. Iyi michina inopa kuchengetedza kwakanyanya kune pre-term vacheche kana zvichidiwa. Parizvino, vacheche mazana maviri nemapfumbamwe vakashandisa zvikamu izvi.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo munharaunda dzakasimba hutano hwakanaka, uye nekudaro, Sandals Foundation yanga ichishanda nesimba pamwe chete nenzvimbo dzekurapa seGomo reJohani kubatsira kuvaka kugona kwavo nekupa mukana wekudzidziswa, zvipo zvemidziyo inodiwa, uye mipiro yetekinoroji yakagadziridzwa inobatanidza zvipatara zvemuno kune zvepasirese.
Iyi michina yeVacheche Kuchengeta Center inopa kutarisirwa kwakakomba, senge kudzora tembiricha, kuongorora kwehunyanzvi, kuyera, uye rubatsiro rwekufema kutanga vana vacheche pazvinoonekwa zvakakodzera.
Flanker's Music Chirongwa
The Flanker Marching Band iboka revechidiki vanovimbisa kubva mukati meguta - nharaunda yeFlanker muMontego Bay, Jamaica. Munguva yeMega Fam nzendo, vamiriri vekufamba vakauya pamwechete kuzopa kuFlanker's Resource Center.
Mari yechirongwa ichi yakapa zviridzwa zvitsva uye kugadzirisa kune zviripo zviripo, zvidzidzo uye maturusi evhiki nevhiki uye anoshanda makirasi, mayunifomu enhengo dzebhendi, murongi webhandi, uye mubhadharo wekuongorora bvunzo dzepamoyo. Chikwata ichi chave kutamba pachidanho icho chakabhadharwa kutamba kuSandals Montego Bay nzvimbo dzekugara kamwechete pasvondo.
“Pamakore angu eruzivo rwemumhanzi, ndinoziva nezvemasangano anobatsira nedanho rekubatsira kuzvirongwa zvebhendi, asi Sandals Foundation yatora mhando yavo yekubatsira kune rimwe danho. Ndinodada kuti Sandals Foundation ndiyo yave yekutanga kutora matanho akakura kumutsiridza chirongwa cheFlanker Marching Band, ”akadaro Mikel Turner, Director weBand.
“Ndisati ndave chikamu cheboka, ndanga ndisinganyatso kuziva kuve chikamu chechikwata uye nekutenda mandiri nemano angu. Chikwata ichi chinondipa chekutarisira uye nenzira yakanaka yekutaura, ”akadaro nhengo yechikwata Renaldo Hendrick.
Iyo Sandals Foundation yazvipira kunharaunda yese yeCaribbean kuti ipindure nekukurumidza kune emergency nyika inokonzerwa nenjodzi dzinongoitika dzoga.
Nheyo dzinotsigira rutsigiro kubva kune vashanyi vevashanyi, vatengesi vevashambadziri, vamiriri vekufamba, vatengesi, nemamwe masangano kuunza ruyamuro kunharaunda dzakakanganiswa nenjodzi. Pamusoro pezvo, masangano emuno ari pasi ari kuita basa kuti ave nechokwadi chekuti kuedza kwakasimba.
Sandals Foundation inoenderera mberi nekubatana kwayo neSickKids Foundation chirongwa cheCaribbean, ichikanganisa zviwi zveBahamas, Barbados, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, neGrenadines. Icho chinangwa ndechekupa kudzidziswa uye zviwanikwa kuti zvirinani kuongorora uye kurapa vana vane gomarara uye zvakakomba ropa kusagadzikana mukati meCaribbean.
Iyo Sandals Foundation yakabatsira mukubatsira 3 makuru maitiro:
Kugadzira kamuri yetelemedicine muSt Lucia saka nyanzvi dzekurapa dzemuno dzinogona kuendesa zviitiko zvevarwere kuSickKids kuti vapiwe mazano, pamwe nekubatanidza vanachiremba kuzvitsuwa zvakavakidzana.
Kudzidziswa kwechiremba chevana oncologist, Dr. Chantelle Browne, anozodzokera kumusha kwake, Barbados, mushure mekupedza makore maviri kuyanana kuChipatara cheVanorwara Vana muToronto uye kuve wechipiri wevana oncologist muEastern Caribbean.
“Sechikamu cheDivision of Hematology and Oncology paSickKids, ndichave nemukana wekucherechedza nekunyudzwa mukutungamira kwevanopfuura zviuru makumi maviri nezviviri zvevarwere vanoshanyira Sears Cancer Clinic uye vana vangangosvika mazana matatu nemazana mashanu vachangobatwa kenza gore rega rega. muToronto, ”akadaro Dr. Chantelle Brown.
Vakadzi Kubatsira Vamwe Kuwana (WHOA)
Sandals Foundation neBob Marley Foundation vakabatana kuti vagadzirise nyaya isingaperi yekusaenzana kwevanhukadzi muCaribbean. WHOA inopa rutsigiro, kuraira, dzidzo, uye hunyanzvi dzidziso yekupa simba vakadzi vakasarudzika mudunhu rese.